သမ္မတထရမ့်ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး (၄၈) နာရီနှင့် ဘယ်လိုကုသမှုတွေ ပေးနေသလဲ ဆိုတာ – Myanmar
အားလုံးက အမေရိကန်သမ္မတတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုကုသမှုတွေပေးနေသလဲဆိုတာ သိချင်ကြမှာပါ။ မဖြစ်မနေကယ်ရမယ့်လူကို ဘာဆေးတွေပေးသလဲ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့။
ထရမ့်ရဲ့ ဆေးရုံတက်ပြီးပထမဆုံး ၄၈ နာရီဟာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ ရောဂါအခြေအနေဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်မှာလား? မကြာခင်မှာ သက်သာပြီး သမ္မတတာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာလား?
ထရမ့်အခြေအနေကကောင်းပုံရတယ်။ ဆေးရုံရှိရုံးခန်းကနေ စကားပြောတဲ့ ၄ မိနစ် ဗီဒီယိုထဲမှာ သူအခြေအနေကောင်းပြီး မကြာခင်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်။
ဆေးရုံကနေ ပထမဆုံး တွမ်တာ မှာတင်ခဲ့ရာမှာ.. “Going well, I think! Thank you to all. Love!!!” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ “အခြေအနေကောင်းနေတယ်၊ အဲ့လိုငါထင်တယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ ချစ်တယ်!!!” (အာဘွားတော့ .. မပါဘူး)
အိမ်ဖြူတော်ကမထွက်ခင်မှာ အောက်ဆီဂျင်ပေးရလို့ အိမ်ဖြူတော်ဝန်ထမ်းတွေ စိုးရိမ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့သေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ဖြူတော်ကနေဘာအကူညီမှမပါပဲ အေးအေးဆေးဆေးထွက်ကာ လက်မထောင်ပြပြီး ဟယ်လီကော်ပတာပေါ်တက်သွားခဲ့တယ်။
NewYork Times ကတော့ စနေနေ့မှာ ထရမ့်ဟာ ချောင်းဆိုးနေကြောင်း၊ ရင်ကျပ်နေကြောင်း၊ ကိုယ်ပူချိန်တက်နေကြောင်းနဲ့ အဲ့ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေက ပိုမိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ရေးခဲ့တယ်။
အိမ်ဖြူတော်သမားတော် Dr Conley ကတော့ ထရမ့်ဟာ အသက်ရှုရခက်ခဲမနေဘူး။ ဆေးရုံမှာ အောက်ဆီဂျင်လည်း မပေးထားရဘူးလို့ဆိုတယ်။ ကိုယ်ပူချိန်လည်းမတက်ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်လုံးဝကင်းသွားပြီလို့တော့ ပြောလို့မရသေးဘူးတဲ့။
ထရမ့်ရဲ့အသက်အရွယ်၊ အမျိုးသားဖြစ်မှု၊ အဝနည်းနည်းလွန်မှုတွေအရ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် သေနိုင်နှုန်း ၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်။ ထရမ့်က တွမ်တာ မှာ အတော်ကြာကြာပျောက်သွားလိုက်သေးတော့ သို့လောသို့လော တွေးကြတာပေါ့။
University of Virginia ရဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနက Kyle Kondik ကပြောရာမှာ.. “ထရမ့်အခြေအနေကို သူ့ဆရာဝန်တွေက တစ်မျိုးပြောတယ်၊ အိမ်ဖြူတော်ကတစ်မျိုးပြောတယ်။ ပြီးတော့ သူ့တို့ပြောစကားကိုပြန်ပြင်ကြသေးတယ်။
အဲ့ဒါက ထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် အားနည်းချက်ပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာ ပိုပြီးခိုင်မာအောင်ပြနေသလိုပဲတဲ့။”
ထရမ့်ကို ဘယ်လိုကုသမှုတွေ ပေးနေသလဲ?
ရောဂါအခြေအနေမဆိုးအောင် ကုသပေးမှုအနေနဲ့က ထရမ့်ကို Regeneron ရဲ့ REGN-COV2 ကိုယ်ခံအား antibodies cocktail ကုထုံးပေးထားတယ်။ ကိုဗစ် ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်မယ့် antibodies ကို ထိုးသွင်းပေးပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဆက်မပွားအောင် နှိမ်ကွပ်ဖို့လုပ်တာဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့ Gilead ရဲ့ Remdesivir ကိုလည်း ထိုးပေးထားသေးတယ်။ သောက်ဆေးတွေဘက်က.. Vitamin C, Vitamin D နဲ့ zinc ပေးထားတယ်။ ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ပေးတဲ့ဆေးတွေပေါ့။ အစာအိမ်နာရင်သောက်တဲ့ဆေး famotidine လည်းပေးထားတယ်။ (ကျနော်လုပ်တာနဲ့ famotidine တွေဈေးတက်ကုန်အုံးမယ်။)
Famotidine က ကိုဗစ်-၁၉ ကိုကုသနိုင်တယ်လို့ သက်သေမပြနိုင်သေးဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလို့ လေ့လာနေတဲ့ဆေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန်သမ္မတတောင်သောက်သေးတာ.. ဟဲ့.. ဖောင်ကြီးပို့မယ့်အထဲ ထည့်လိုက်အုံးလုပ်နေကြအုံးမယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တော့တိုင်ပင်ကြပါဗျ။ ပဲကြီးလှော်ဝါးသလို ရမ်းဝါးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။
အိပ်ဆေး Melatonin လည်းပေးထားတယ်။ Asprin လည်းပေးထားတယ်။ အက်စပရင်ကတော့ ထရမ့်အရင်ပြောဖူးတာ သူနေ့တိုင်းသောက်သတဲ့။ အက်စပရင်ကတော့ Heart attack မရဖို့နဲ့ ကိုယ်ပူချိန်ကျဖို့သောက်တာပါ။
ချားစီးရင်း Selfieရိုက်ဖို့လုပ်သောကြောင့် ခေါင်းစုတ်သွားရတဲ့ကောင်မလေး